ပညာရေးမဟာဘွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာဘွဲ့
မြို့မ-မြင့်ကြွယ် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာနှင့် ကရာတေးသိပ္ပံ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ဦးမြင့်ကြွယ်သည် ပညာရေးမဟာဘွဲ့ ၊ မဟာဝံသယုဝပဏ္ဍိတဘွဲ့ ၊ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ များကို ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် စာပေဆောင်းပါးများ‌စတင်ရေးသားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့်အပြင် မြို့ မ ဟူ သော အမည်ကို ဂုဏ်ယူသောကြောင့် မြို့ မ-မြင့်ကြွယ် ဟူသော ကလောင်အမည် ကို ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းပညာရပ်၊ ကရာတေး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ပညာရေး တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် မြန်မာစာပေဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ စာအုပ်ပေါင်း (၁၅၀) ကျော်ကို မြန်မာဘာသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဆိုရှိကိ ကရာတေး အသင်းတည်ထောင်သူနှင့် နည်းပြချုပ် ဖြစ်သည်။ ကရာတေးသိပ္ပံ Institute of Karate ၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျူဒိုပညာကို အဖွဲ့ချုပ် Judo Federation ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ ကရာတေးပညာကိုလည်း အဖွဲ့ချုပ် Karate Federation အဖြစ် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ စာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ တွင် ကြေးမုံသတင်းစာမှ လည်းကောင်း စတင်ရေးသားအကြံပြုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် Burma Karate Federation စနစ်တကျ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ စတင်ရေးသားအကြံပြုခဲ့ပြီး ၈ နှစ်နှင့် ၄ ရက်ကြာမှ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်တွင် "မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်" (Myanmar Karatedo Federation) ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကရာတေး KUMITE (組手 空手 free sparring) championship ပထမဆု ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ အာရှနိုင်ငံများ‌ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေဆု၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာစာပေဆု၊ စာပဒေသာ ပထမဆု၊ သမိုင်းပါမောက္ခဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်စာပေဆု၊ စာပေဗိမာန်စာမူဆု များ‌ ရခဲ့သည်။ မြို့မကျောင်း(၇၅)နှစ်ပြည့်စိန်ရတု (၁၉၂၀-၁၉၉၅) နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (၇၅)နှစ်ပြည့် စိန်ရတုပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာတွင် သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦး အနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်(ပင်လုံစာချုပ်) နှင့် အမိ ဒေါ်အမာ (ခေါ်) ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်းတို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း မောင်နှမ ၄ ဦး(ဒေါ်ခင်မာကြွယ်၊ ဦးဌေးကြွယ်၊ ဒေါ်မြမြသန်း၊ ဦးမြင့်ကြွယ် (မြို့မ-မြင့်ကြွယ်) တွင် အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်။ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကြီး ( ဖဆပလ)တွင် ၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၈ အထိ အဖွဲ့ဝင်နှင့် အမှုဆောင်အဖြစ် ဦးဆောင် တာဝန်ယူပါဝင်သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် အတူ ပင်လုံညီလာခံ တွင်လည်း ပါဝင် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်ဗိုလ်သန်းကြွယ်၊ သခင်သန်းကြွယ်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် (ပင်လုံစာချုပ်) အမည်ဖြင့် ထင်ရှားသည်။
အမိ ဒေါ်အမာ (ခေါ်) ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း၏ မိခင်မှာ ဒေါ်တင်လှ (ဝိုင်အမ်ဘီအေ နာယက၊၊ သမာဓိ မြို့ဝန်ပန်းကန်စက်ဦးသော် ၏ညီမအရင်း) ဖြစ်သည်။ ဒေါ်တင်လှ နှင့် ပန်းကန်စက်ဦးသော် တို့မောင်နှမ၂ ဦးမှာ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆင်ဖြူရှင်မင်းနှင့် စစ်သူကြီး မင်းကြီးမဟာသီဟသူရ တို့ ၏(၂)ဆက်မြောက်မြေးတော်များဖြစ်သည်။
↑ (2000) History of Burma (in en). New Delhi: Asian Educational Services, 257. ISBN 9788120613652။
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းပညာရှင်များ စာအုပ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြင့်ကြွယ်၊_မြို့မ&oldid=496080" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။